izinto kwienqwelo zakho
ixabiso lentengo yenqwelo
Ukuhanjiswa kweMhlaba wonke kwiMiyalelo yonke
Thenga Zonke Jonga YONKE Imveliso
bafikayo Jonga zonke
UkuKhutshwa kwamaHlapha kwihlabathi lonke Cofa apha Ukuze uthole olunye ulwazi
ikhaya > Ingubo yoBuhemian Hippie Dress
luhlaza bomvu umbala
Size One ubungakanani
Ubuluhlaza / omnye Umlinganiselo - $99.00 obomvu / omnye Umlinganiselo - $99.00
nqakraza Apha ukuba zaziswe nge-imeyili xa iingubo zeFloral Bohemian Hippie zifumaneka.
UkuThunyelwa kweeNkonzo emhlabeni wonke. Akukho Myalelo oNcinane ofunekayo.
Sijongana nabathengi bethu ngeentsuku ze-30 ukubuya okanye ukubuyisela iWarranty Limited. Iyakwenza ukwazi ukuthenga izinto ngesimo esingenakukhathazeka kwaye ube nolwazi olumangalisayo kwiBuddha Trends.
Ukubuyisela into ethile nceda uvakashele ikhasi lethu lokubuya / lokutshintshiselanahttps://www.buddhatrends.com/pages/returns-exchangekwaye uqhagamshelane nathi kwifom yoqhagamshelwano.
Gcina ukhumbule ukuba idilesi yethu yokuthumela & yokubuyisela iyahluka ngokuxhomekeka kwilizwe lakho kunye nesitokisi. Ngaloo ndlela, sincoma kakhulu ukuba uqhagamshelane nathi ukuze sikwazi ukukunika zonke iinkcukacha, idilesi yokubuyisela kunye nemiyalelo.
Kwimeko yokusetyenziswa, ukuhlamba, ukulimala okanye nayiphi na enye inguqu kwiimeko zangaphambili zento, asikwazi ukuqinisekisa ukuba kubuyiselwa imali. Umgaqo wokubuyisela ubeka ngokucacileyo le miqathango njengenxalenye yomgaqo wokubuyisela umcimbi. Nayiphi na into engenaye imeko yangaphambili kunye nokupakishwa ayayi kwamkelwa.
Buddha Trends eqinisekisiwe
Joyina uluhlu lwethu lokubhala
Ukufumana iikhuphoni, izaphulelo ezikhethekileyo, kunye neendaba zakutshanje ezithunyelwa kwiibhokisi lakho lokungenayo!